Muhiimadda Waxtarka Hirgelinta | Martech Zone
Isniin, February 24, 2020 Isniin, February 24, 2020 Carson Conant
Iyadoo tikniyoolajiyadda karti-siinta iibka la caddeeyay inay kordhiso dakhliga 66%, 93% shirkaduhu wali ma hirgalin madal awood u leh iibinta. Tani waxay badanaa u sabab tahay khuraafaadka waxtarka iibka oo qaali ah, dhib badanna la geeyo oo leh heerar korsasho oo hooseeya. Kahor intaanan u dhex galin faa iidooyinka barmaamijka kaabaya iibinta iyo waxa ay qabato, aan marka hore u daadagno waxa karti u leh iibintu iyo maxay muhiim u tahay.
Waa Maxay Iibinta Waxtarka?
Sida laga soo xigtay Forrester Consulting, karti iibka waxaa lagu qeexay:
Nidaam istiraatiiji ah, oo socda oo ku qalabeeya dhammaan shaqaalaha wajahaya macmiilka awood u leh inay si joogto ah oo nidaamsan ula yeeshaan wada hadal qiimo leh kooxda saxda ah ee daneeyayaasha macaamiisha marxalad kasta oo ka mid ah wareegga nolosha ee xalinta dhibaatada macaamiisha si loo wanaajiyo soo celinta maalgashiga iibinta nidaamka.
Waa Maxay “Waxtarka Iibinta” Iyo Sidee Ayuu Forrester Ugu Baxay Qeexitaankiisa?
Marka maxay taasi dhab ahaantii ka dhigan tahay?
Haddii aad ka fikirto xooggaaga iibka marka la eego gambaleelka gambaleelka, qiyaasi inaad ka wareejinayso celceliskaaga iibiyaasha qaybta hoose ee gambaleelka gambaleelka uguna sarreysa kuwa ugu sarreeya. Hadafka karti-siinta iibintu waa inaad ka wareejiso celceliskaaga wax-iibiyaha hoosta hoose ilaa sare si ay ugu bilaabaan inay u iibiyaan sida wax-qabad-sare. Iibiyeyaashaada cusub ama kuwa celceliska ah, waxaa macquul ah inay ka maqan yihiin aqoon ama soojiidasho inay ku fuliyaan bandhigyada iibka ee qiimaha ku saleysan ee kuwa waxqabadka sarreeya ay ku sameeyaan iibsade kasta. Haysashada tikniyoolajiyadda awood u siinta iibinta ee saxda ah waxay u oggolaaneysaa kuwa cusub iyo kuwa celceliska iibiyeyaasha inay arkaan waxa la shaqeynaya iibiyeyaasha ugu sarreeya si ay uga caawiyaan sare u qaadista guusha iibkooda. At Mediafly, waxaan ugu yeernaa isbeddelladaan ka socda hay'ad iibin ah, Iibinta Iibsiga ™.
Maxaad Ugu Baahan Tahay Waxtarka Iibinta?
Si fudud loo dhigo, iibsadayaashu way isbeddeleen. Ilaa 70% macluumaadka iibsadayaasha B2B arag waa is-daah-fureen khadka tooska ah ee internetka, looma siinin wakiilka iibka. Markuu iibsaduhu ku xirmo iibiyaha, rajooyinka ayaa sarreeya. Ma rabaan inay maqlaan jawi ku saabsan astaamaha astaamaha iyo shaqooyinka. Taabadalkeed, waxay raadiyaan shaqsiyaad khibrad u leh iibsashada iyo khibrad u leh, iyaga oo u oggolaanaya inay fahmaan caqabadaha gaarka ah ee alaabtaada ama adeeggaagu xalliyaan iyo sida ay uga caawin doonto inay gaaraan himilooyinkooda dhaqaale.
Isbeddelkan ku yimid dabeecadda iibsadaha, iibiyeyaashu waxay u baahan yihiin inay ka gudbaan soo bandhigidda PowerPoint fadhida. Taa baddalkeeda, waxay u baahan yihiin inay yeeshaan tiknoolajiyad ay awood ugu yeeshaan inay isla goobta ku yaalliin, iyagoo siinaya macluumaad waqtiga-dhabta ah si ay kalsooni ugu dhisaan iibsadahooda ugu dambayntiina, xiraan heshiiska. Tiknoolajiyada awoodsiinta iibinta ayaa sidaas sameysa
Sida laga soo xigtay Forbes, xalalka waxtarka iibinta ayaa ah maalgashiga tikniyoolajiyadeed ee ugu sarreeya ee kor loogu qaadayo wax soo saarka iibka. Xogta warbixinta waxay muujineysaa taas Shirkadaha 59% taas oo dhaaftay bartilmaameedyada dakhliga - iyo 72% kuwaas oo kadhaafaya 25% ama kabadan - waxay leeyihiin shaqo awoodsiin iibsi qeexan.
Maxay Tahay In Aaladda Awoodgelinta Iibinta Ay Sameyso?
In kasta oo ay jiraan awoodo badan oo ku jira barnaamijka wax-u-qabadka ee iibinta, haddana, innaga Mediafly, Aaminsan in barnaamijka waxqabadka iibintu ay tahay inuu siiyo iibiyeyaasha waxyaabaha soo socda:
Awoodda si fudud loogu heli karo waxyaabaha ku habboon, ee ugu dambeeyay ee ay ka mid yihiin fiidiyowyada, aaladaha is-dhexgalka, isbarbar-dhigyada loogu adeegsanayo wadahadalka lala yeelanayo iibsadayaasha
Awoodda si deg deg ah udub dhexaad u ah wadahadalka iibka si loo daboolo baahiyaha saxda ah ee iibsadaha, abuurista khibrad shaqsiyeed iyo mid gaar ah iibsadaha
Qalabka isdhexgalka oo ay ku jiraan ROI, TCO iyo xisaabiyaha qiimaha iibiya, iyo qalabka wax soosaarayaasha, ka soo qaadashada fikradaha iibsadaha si ay uga caawiso hagista doodaha iibka
Awoodda looga soo jiidan karo xogta waqtiga dhabta ah ilo kala duwan, oo gacan ka geysaneysa wax ka qabashada caqabadaha gaarka ah ee iibsadaha
Xogta iyo falanqaynta ku saabsan sida ay wax u socdaan, fikradaha ku saleysan iibsadaha gaarka ah ee xogta ku saleysan si heshiisyada horay loogu socdo iyo fikradaha ku saabsan sida waxyaabaha looga faa'iideysanayo iibka loona cuno rajooyinka.
Is dhexgalka CRM si gacan looga geysto farsamaynta kulanka fariinta dabagalka iyo agabka tixraaca ee loo isticmaalay kulamadii hore
Awoodahani waxay dejinayaan iibsadayaasha heer kasta oo ay ku gaadhaan guusha. Nasiib darrose, tikniyoolajiyadda karti-siinta iibka waxaa badanaa loo arkaa inay yihiin qaali, dhib badan oo khatar badan. Laakiin maahan inay ahaato. Dhamaan kooxaha iibka ama ururada iibka waxay kujiraan safarkooda u sahlaya iibinta. Iyadoo aysan jirin hal safar oo isku mid ah, ururradu waa inay waqti siiyaan inay la shaqeeyaan adeeg bixiyahooda awood u siinta si ay u abuuraan barxad si gaar ah ugu gaar ah baahiyaha ururkooda.
Recently, Mediafly acquicasaan casaan ah si looga caawiyo bixinta awood u siinta iibka dhammaan. La soo wareegitaankan, waxaan awoodnaa inaan ku bixinno xalka ugu ballaadhan uguna fudud ee iibinta xallinta ganacsiyada nooc kasta ha noqotee, ka saarista qiimaha heerka ganacsiga iyo hirgelinta caqabadaha shirkadaha badan ee dareema cabsi-gelinta markay iibsanayaan tikniyoolajiyadda awoodsiinta iibka.
Haddii aad ka doodayso iibsiga tikniyoolajiyadda waxtarka iibinta laakiin aad ka walaacsan tahay hirgelinta, waqtiga u go'an, iwm., qaado talaabooyin yar yar oo ku wajahan hadafkaaga. Had iyo jeer xusuusnow tani waa safar. Adoo ku daraya tikniyoolajiyadda karti-siinta iibka, waad joojin kartaa daawashada celceliska iibiyayaashu inay halgan ugu jiraan sidii ay ula kulmi lahaayeen yoolalka ay leeyihiin, isla markaana, u daawadaan kooxdaada iibka oo dhan inay horumar gaaraan.
Tags: waxqabadka contentisdhexgalka crmmediaflyQalabka wax soo saarkawaxyaabaha iibka ahwaxqabadka iibka waxqabadkawadahadalada iibkaKordhinta Iibka
Carson Conant waa agaasimaha guud iyo aasaasaha bixiyaha xalka u sahla iibka ee saldhiggiisu yahay Chicago Mediafly. Markii uu ku soo koray qoys ganacsade ah, Carson kuma cusba caqabadaha iyo abaalmarinta dhisidda shirkad laga soo bilaabo aasaaska iyo isku soo dubaridka koox heer sare ah si ay ugu guuleystaan ​​himiladiisa. Marka loo eego hoggaanka Carson, Mediafly waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay shirkadda 'Inc. 5000 Shirkada Kobaca Deg-degga Badan leh shan sano oo isku xigta, oo ka mid ah Inc's Workplaces-ka ugu Fiican ee 2018, iyo Meel Ugu Fiican ee Lagu Shaqeeyo Crain's Chicago Business. Barnaamijka 'Mediafly' waxaa hada ka faa'iideysanaya shirkadaha ugu sareeya ee Fortune 500 oo ay ka mid yihiin PepsiCo, MillerCoors, Disney, iyo Goldman Sachs.
Sida ay fuliyayaashu uga faa'iideysan karaan falanqaynta xogta si kor loogu qaado waxqabadka